Tarreen humna-qabeeyyiin addunyaa bara 2014 Ifa godhame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Tarreen humna-qabeeyyiin addunyaa bara 2014 Ifa godhame
Maqaan namoota humna qabeeyyii woggaa woggatti tarreeffama- bara 2009 eegalee. Hedduun namoota tarree kana dhuunfataniii kanneen masaraa mootummaa keessa jirani, abbootii qabeenyaa, dura taa’ota kampaanii gurguddaa fi namoota ummata irraatti dhiibbaa fi hordoftoota qabaniidha. Namoonni bebbeekamoon fkn hooggantoonni amantaa fi kanneen hojii dansaan hawaasa addunyaa biratti beekaman tarree kana keessa seenu.
Humnaqabeessa addunyaa maqaa dhahaa yoo jedhame hedduun keenya shakkii malee Baaraak Obaamaa jechuun keenna hinhafu. Dhugaadha ammo, yeroodheraadhaaf akkas ture dubbichi isaa. Peresidaantii Ameerikaa ta’uun kophaa isatti nama humneessa, sadrkaa ol’aana irra nama geessa. Dubbiin ifatti mul’atu garuu, presidaantii Ameerikaa ta’uun qofti yeroo hunda muummee tarree humnaqabeeyyii irra nama hinkaayu.
Madaalliin humnaqabeeyyii addunyaa kan irratti xiyeeffatu, dhugatti eenyutu qilleessa siyaasa addunyaa asii fi achi oofaa, kubbaa siyaasaa eennutu harkaa qabaa xiyyeeffannaa keessa seensisa. Bifuma kanaan bara 2014 hedduu waa’een isaa fi biyya isaa xiyyeeffannaa sabahimaa addunyaa irraa kan hinfagaanne, peresidaantii Rashiyaa Vilaadmiir Putiin nama humanqabeessa bara kanaa godhuun Forbes muudeera. Bara dabres, jechuun 2013, Puutiin ture humnaqabeessa addunyaa jedhamee kan waamame. Muudamni kuni akkuma gara gubbaatti tuquu yaale, nama kubbaa siyaasaa harkaa qabu agarsiisuu bira ce’ee badhaasas ta’ee waan biraa kan namaaf argamsiisuu miti. Tapha siyaasaan beekkamuun waan salphaa miti- hubadhaa.
Sadarkaa addunyaatti namoota 72 kan humnaqabeeyyii jedhamanii tarreeffaman. Isaan keessaa 17 hooggantoota biyyoota addaddaati, 39 ammoo dura taa’ota dhaabbilee daldalaati. Tarree kana keessatti Phaaphaasiin Katolikii Romaa Fraansiis jiru. Kaliifaa Islamic State [ISIS] jechuun kan moggaafame Abu Bakr al-Bagdaadiinis [sad.54ffaa] bara kana garee humanqabeeyyiitti makamuu danda’eera.
Garee kana keessaa dubartiin lama, Chaansilar biyya Jarmanii Angelaa Merkilii fi muummeen Baankii Jiddugaleessa Ameerkiaa Janet Yelen, sadarkaa 5ffaa fi 6ffaa wolduraa duubaan qabataniiru. Wolumaa galatti bara kana maqaa dubartoota 9tu sadarkaa keessa seene.
Ameerikaan akkuma kana duraa namoota heddu tarree humnaqabeeyyii addunyaa keessa seensisuudhaan tokkoffaadha. Namoonni 26 USA irraa yoo ta’an, biyyoonni Eesiyaa bara kana humnaqabeeyyii 19 tarree keessa seensisuudhaan sadarkaa 2ffaa qabataniiru. Aafrikaa keessaa garee humnaqabeeyyii kanatti makamuu kan danda’e peresidaantii biyya Masrii Abdel el-Siisii [sad. 51ffaa] fi abbaa qabeenyyaa biyya Naayjeeriyaa Aliikoo Dangootee [sad.68ffaa] qofa.
Sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa namoota humnaqabeeyyii bara 2014 jechuun Forbes kan tarreesse Vilaadmiir Putiin, Baaraak Obaamaa, Shii Yinping [Xi Jinping, China], Pope Fransiis fi Angelaa Merkil. Obaamaan bara 2009 eegalee humnaqabeessa humanqabeeyyii ture. Garuu woggooota lamaan kanniin [2013 fi 2014] fonqolchaan Putiiniin irra gayuu isaatiin sadarkaa 2ffaa irratti hafuuf dirqameera.
Tarreen kuni namoota beebbeekamoo kanniin akka Bil Geets, Bil Kliinten, Laaryii Pejii fi Sarjee Briin [hundeessitoota Google], Maark Zuukerberg [Facebook] fi Waaren Baffeet ammata.
world powerful men
Next articleDaldalaan Milkaayuuf Dhimmoota 5 Kanniinitti Xiyyeeffannaa Laataa
Mr WordPress Nov 13, 2014 At 10:19 am